Ny teny vitsivitsy ny momba ny any Portiogaly
Raha mbola tsy nisy ny Portiogaly, maka ny diany dia misy mendrika izany. Izany mahafinaritra firenena amin’ny mirotoroto, unhurried, tonon-ary kely melancholic amin’ny maha-olona. Ny maritrano ny tanàna toy ny any Espaina, maro ny maitso, mazava loko sy jiro, Atsimo ny loko dia faly hanafosafo ny maso. Aho tsy ho zavatra ary tsy lalina nianatra ny tantara, fomban-drazana, ny literatiora, ary ny zavatra ao Portiogaly. Noho izany dia tsy ny rehetra no afaka miteny ho an’ny tenany, fa kosa mamerina ny teny hafa, mihoatra nohazavaina ny olona, izay matetika aho mba hatoky. Aho fianarana Breziliana fiteny portiogey, ary ny zavatra (amim-pahatsorana, kely), ianao no mahalala. Ao Portiogaly tonga saina aho fa ny Breziliana misy tanteraka tsy misy ilàna azy. Izy ireo no miteny amin’ny fomba hafa. Ny fihetseham-po ny feo dia samy hafa tanteraka, dia ny fanononana teny saika ny teny rehetra dia samy hafa. Ny voambolana ny teny hafa koa. Fototra teny hoe sakafo Maraina dia hoy hafa tao Brezila ary Portiogaly.
Tsy toy ny continental sy ny Breziliana ny fiovana ny fiteny portiogey betsaka kokoa ary manan-danja kokoa noho ny Amerikana sy ny anglisy. Mino izany aho. Amin’ny Ankapobeny, raha nifantoka tamin’ny Brezila, mila mianatra Breziliana portiogey, Portiogaly anarana net. Mba hisorohana ny tranga afangaro tsy mendrika izany aho ho an’ny tenako nahatakatra. Tanàna ao Portiogaly dia be mangina sy miadana kokoa noho ny Moskoa. Fa dia ny gadona ny fiainana dia mitovy amin’ny azy ireo. Rehefa any ianao, dia azonao ampiasaina mba mandeha mirotoroto ary tsikelikely, ny tsiky sy ho mahalala fomba. Rehefa niverina tany Moscou aho, dia tsapako fa tsy mendrika ho ao an-joron, izany hoe, tsotra kokoa, bumping ho olona ao amin’ny metro. Tsy manana fotoana mba tsy mikapoka ny tongotra, ny tanana na ny kiho olona. Amin’ny Ankapobeny, ny andro voalohany indray aho, natositosika ary niharan’ny herisetra. Dia naka ny roa andro. Ny fahaiza-niara-niasa taminay tao amin’ny mikoriana ny olona, dia tonga indray ho ahy mba handeha haingana tsy mikasika na iza na iza, mandritra ny roa segondra manenjika ny amin’ny izay ilaina amin’ny zara fatiantoka sy mangana ny vatana sy ny saina, mba hahita ny lalana fohy indrindra ary bronirovat izany raha tsy misy izany ao Moskoa tsy hanao. Misy isan-karazany ny gadona. Io gadona afaka mikoropadropaka anatin’ny tahaka ny tornado, ary hanipy izay tsy tianao (raha ianao, mazava ho azy, mijanona ho velona). Ary angamba tsy mba manary izany, raha toa ianao sinhroniziruete. Mila fotoana izao, ary, mazava ho azy, ny hery. Ny zavatra tsy tia miady hevitra, mivantana any amin’ny fifandirana. Raha tsorina, izy rehetra mijaly. Ireo Eoropeana conformists. Raha tsy tia zavatra iray, dia nisento, mitaraina, fa mafy mba handeha lavitra kokoa, tsy miteny. Izy ireo dia tony kokoa noho ny teny espaniola. Ny emotionality dia malefaka sy mellow toy ny taloha seranan-tsambo. Ny anarana dia tsy ny tarehy indrindra ny Espaniola, mihevitra azy ireo mpanafika sy usurpers ny faritany. Raha ny fahitàna azy, dia matahotra fotsiny fa ny Espaniola dia te cost maoderina mandray ny fizakana ny Portiogaly ary hifehy azy. Roa taona lasa izay i Portiogaly na dia ny lalàna mandrara ny fivarotana ny real estate espaniola orinasa. (Noho ny cheapness ny real estate espaniola orinasa no mividy trano any, ary nanokatra birao tao Lisbon fa ny zavatra tsy tia). Ny anarana dia kely saro-piaro Brezila. Rehefa afaka izany, dia nanokatra izany, ka mba miteny, ny ankizy, izay nitombo, ary tavela aoriana lavitra ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny dia tena mirehareha ny zaza, ary dia mora mahatsapa ny fampitahana ny Portiogaly amin’ny Brezila. Tsy ny Breziliana.
Rehefa dinihina tokoa, ny anarana dia miavonavona ny olona, izay, na dia eo aza ny tsy fahampiana sy ny olana ara-toekarena, mitana ny fiandrianam-pirenena sy ny fiavaham-pirenena. Izany dia mendrika ny fanajana. Raha ny bandy manomboka Mampiaraka ny zavatra zazavavy, dia azo antoka fa izany dia avy amin’ny tenany tsy handeha na aiza na aiza. Ny tovovavy mandritra ny fivoriana sy ny fikaotiana sipa mifikitra amin’ny bandy stranglehold sy toa mitaraina ny olona, tsy mba tahaka izany, dia tsy manome azy ireo fahafahana manokana. Ankehitriny, ny lehilahy, foana ny zavatra ilaina ho amin’ny olon-tiany, ary raha tsy manodidina noho izany dia tsy maintsy ho tsara ny antony. Te ho irery noho ny antony tsy heverina. Inona no iray raha toa isika dia miara. Noho izany dia namaritra ny zavatra ankizivavy roa ny namako momba ny olona. Ary tamin’izany andro izany olona mbola tsy maintsy miezaka mafy ny handresy ilay tovovavy. Zazavavy Portugal mirehareha sy tsy azo atonina zavaboary. Ny zava-misy fa portiogey-sobstvennosti manana ny lehilahy dia tsy midika fa izy dia vonona ny zozoro ny voalohany comer. Ny lehilahy iray dia tokony hahazo ny voalohany, ary avy eo ny vehivavy dia manana ny fanamarihana vitsivitsy avy nanao ny faharoa tany Portiogaly ary avy resaka amin’ny olona maro. Portiogaly, mazava ho azy, zavatra maro kokoa sy teny vitsivitsy fotsiny aho fa tsy afaka milaza zavatra betsaka momba ny firenena iray manontolo, fa efa be dia be ny zavatra nolazainy (nanoratra) taorian’ny voalohany fandehana any Lisbon ary Porto. Ankoatra ny hafa ahy be loatra ny zavatra lazaina (indrindra anaty boky, directories sy Aterineto), ka hampandeha tsara sy kanto (izany hoe ny fotoana) boribory. Mahaliana, i Portugal sy i Brezila ihany ny feo. Portiogaly dia mbola tsy kely Brezila, ary tena ampy (ary somary underrated) dia firenena iray manan-karena tantara sy ny kolontsaina. Fa ny zava-dehibe indrindra, mazava ho azy, fa dia ny firenena izay nanome izao tontolo izao Brezila. Noho izany dia ilaina ny fitiavana amim-pitiavana sy amin-kitsimpo ny fanajana
← Maimaim-poana webcam Lisbon an-tserasera. Ny lanja ara-tantara ao an-tanàna
Mahafinaritra sy hiresaka amin'ny ankizivavy tsy misy fisoratana anarana →